Baabuur La Gubay Iyo Rabshado Loo Taag Waayey - Guul-darradii PSG Qas Ka Abuurtay Paris Iyo Magaalada Marseille Oo Dariiqyada Loo Xidhay Farxad Darteed - Gool24.Net
Baabuur La Gubay Iyo Rabshado Loo Taag Waayey – Guul-darradii PSG Qas Ka Abuurtay Paris Iyo Magaalada Marseille Oo Dariiqyada Loo Xidhay Farxad Darteed
Taageereyaal markii hore farxad muujinayay ayaa mar kaliya isku rogay kuwo cadhaysan, waxaanay rasbado ka sameeyeen waddooyinka magaalo madaxda waddanka Faransiiska ee Paris kaddib markii laga badiyey kooxda Paris Saint-Germain kulankii finalka Champions League oo ay Bayern Munich koobka ku guuleysatay.
Kumannaan taageereyaal ah ayaa jabiyey sharciga xakamaynta Korona Fayras, waxaanay iskugu soo baxeen darqiiyqada iyagoo taageeraya PSG ka hor intii aanay bilaabmin ciyaartii finalka Champions League, waxaanay halkaas ka muujinayeen sida ay u garab taagan yihiin kooxdooda, hase yeeshee Bayern Munich ayaa nasiib u yeelatay koobka oo 1-0 ku adkaatay.
Mar kaliya ayay magaaladu noqotay meel qasan oo rabshado hadheeyeen, waxaanay taageereyaashan oo ka niyad-jabay khasaaraha kooxdooda ay dab qabadsiiyeen baabuur waddooyinka socotay iyo kuwo la dhigay waddada hareeraheeda markii isku-socodka jidadka gaadiidka loo joojiyey kumannaanka qof ee dariiqyada tuban.
Warbaahinta Faransiiska ayaa baahisay baabuur gubanaya oo dab la qabasiiyey, kuwo la burburiyey iyo dhibatooyin kale oo ay taageereyaasha PSG ka geysteen magaalada Paris.
Taallada magaalada ee Champs-Elysees ayaa hoosteeda laga arkayay waxyaabo gubanaya inkasta oo biriijkaas aanay wax dhibaato ah soo gaadhin, waxaaana jamaahiirtan xakamayn kari waayey ciidamada booliska.
PSG ayaa ka faa’iidaysan weyday fursadihii ay heleen intii ay ciyaartu socotay, waxaana goolal caddaan ah lumiyey Kylian Mbappe oo ugu yaraan laba jeer goolka ula dhowaaday kubadda balse laag diciif ah ku ganay. Neymar iyo Angel Di Maria ayaa iyaguna helay fursado goolal noqon karayay, waxaase bir adag ku noqday goolhaye Manuel Neuer oo labada kooxood is dhaafiyey.
Kingsley Coman oo kasoo baxay kulliyadda da’yarta PSG ayaa qalbiga ka jabiyey kooxdiisa hore, waxaana kubbad uu ka helay Joshua Kimmich uu daqiiqaddii 59aad madax ugu dhaliyey Bayern Munich goolka kaliya ee kulanka dhashay, isla markaana Munich ay ugu guuleysatay koobka Champions League.
Dhinaca kale, magaalada Marseille ee waddanka Faransiiska ayay ka dhaceen mudaharaadyo ay dad badan iskugu soo baxeen dariiqyada, kuwaas oo lagu taageerayay guusha ay gaadhay Bayern Munich.
Jamaahiirta kooxda Marseille oo ay aad isku neceb yihiin PSG ayaa waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin qalbi-jabka iyo guul-darrada soo gaadhay kooxda ka dhisan magaalada Paris ee xafiiltanka weyni ka dhexeeyo.